Ilay Vehivavy Voalohany Voafidy Ho Filoha Tao Shily · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Janoary 2018 15:34 GMT
(Marihina fa tamin'ny 16 Janoary 2006 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Nandresy tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena tany Shily i Michelle Bachelet , fiarahan'ny elatra afovoany ankavia, nahazo vato 53,49% izy niohatra tamin'ilay kandida mpifaninana taminy, ilay mpandraharaha Sebastian Piñera izay nahazo vato 46,50% avy amin'ny elatra afovoany ankavanana araka ny vokatra ofisialy. Tsy afaka nahahoatra ny governemanta fiaraha-mitantan'ny elatra havia naharitra 16 taona izy, izay nisy ny filoha teo aloha, Ricardo Lagos , izay avy amin'ny elatra afovoany ankavia ihany koa, ary namarana ny fe-potoana niasany niaraka tamin'ny lazany efa maherin'ny 70% .
Ny 16 Janoary 2006 no fihodinana faharoa tamin'ny fifidianana ; Natao ny 11 Desambra ny fihodinana voalohany .
Niantso an'i Michelle Bachelet tao amin'ny fahitalavitra mivantana ny Filoha Lagos, niarahaba sy nanome “ny fanohanany azy”, ary nidera azy tamin'ny filazana fa “mamela antsika hanana governemanta lehibe ny fahafahanao”, namaly i Bachelet fa “naneho ny maha repoblikana azy i Shily, nanome ny lanja ny asa nataontsika ny vahoaka nandritra ireo taona maro ireo.” Nisy ny fivoriana fiaraha-misakafo ny marainan'ny alatsinainy tao an-tranony. Ireo no teny voalohany nolazainy taorian'ny valin'ny fifidianana.
Nisaotra ny vahoaka i Sebastian Piñera ary nilaza fa “ny mihaino ny feon'ny maro an'isa no zava-dehibe ao anatin'ny demaokrasia”. Amin'ny maha mpikambana azy ao amin'ny fiaraha-mitantan'ny Elatra Afovoany Ankavanana dia nanolo-tena izy ny hanaraka ny fampanantenana nataony tamin'ny fampielezan-keviny, ary nanolo-tena mba ho mpanohitra mahomby.
Natao tao amin'ny Hotely Plaza San Francisco , akaikin'ny “Plaza Italia” iray amin'ireo toerana malaza indrindra ao Santiago fanaovana fety goavana ny lanonana fanokanana ny fitondran'i Michelle Bachelet.
Nandray ny asany ny 11 Martsa 2006 ny filoha vaovao, tao amin'ny Kongresy Nasionaly ao Shily ao Valparaíso. Tsy mbola nanao ny kabariny voalohany tamin'ny vahoaka i Michelle Bachelet .
Kitiho eto raha hijery ireo sary tamin'ny fizotry ny fifidianana. Valim-pifidianana hafa tao amin'ny governemanta Shiliana .
Niresaka teo anoloan'ny vahoaka marobe i Bachelet, izay nanohana azy hatrany tamin'ny alàlan'ny fanononana ny anarany, ny fanofahofana saina tao anatin'ny fihetseham-po feno fifaliana. Nandritra ny lahateniny, nanamafy izy fa hisy ny [karazana miralenta], ny fitoviana, ny endrika vaovao ary ny fiaviana ao anatin'ny governemantany. Ankoatra izay, nanambara i Bachelet fa hanana Drafitra Fitovian-jo i Shily ny taona 2010; izay hamahany ny olana toy ny fahasalamam-bahoaka sy ny fanomezana asa fanampiny ho an'ny Shiliana rehetra.
Ankoatra izay, nilaza i Bachelet fa hifototra amin'ny governemanta mandray anjara ny fomba fitantanany ny governemanta, miaraka amin'ny fiarahan-dia matanjaka eo amin'ny fiarahamonina sy ny mpanao politika.
Nanamarika ny sasany tamin'ireo fotoan-tsarotra niainany teo amin'ny fiainany ny filoha voafidy vaovao “niditra teo amin'ny fiainako ny herisetra ary nanimba ny havan-tiako”. Mety milaza ny zava-nitranga teo ambany fitondran'i Pinochet izany; ny fahafatesan'ny rainy Jeneralin'ny Tafika an'Habakabaka, Alberto Bachelet, fony izy tany am-ponja, ny reniny ary ny fampidirana azy am-ponja, ary tatỳ aoriana ny sesitany. Nanampy i Dr. Bachelet, minisitry ny Fahasalamana sy ny Fiarovana teo aloha, nandritra ny fitondran'i Lagos, fa namolavola azy ho vehivavy amin'izao fotoana izao ny fotoan-tsarotra efa nandalovany; feno fanajana lalina ny amin'ny fitoviana sy ny fahamarinana.
Tamin'ny fiafaran'ny kabariny, namonjy an'i Bachelet teny an-tsehatra ny fianakaviany; niara-nihira taminy ny hiram-pirenena ny zanany telo sy ny reniny .